Ciidanka Amaanka ee magaalada Hargeysa oo qabtay xalay walxaha qarxa
December 28, 2011 - Written by
Hargeysa:Ciidamada ammaanka ee magaalada Hargeysa ayaa xalay qabtay miinooyin iyo walxo kale kuwaas oo la dhigay qaar ka mid ah wadooyinka muhiimka ah ee magaalada Hargeysa waxaana ciidanka amaanka soo wargaliyey shacabka ku dhaqan Hargeysa.
Sarkaal sare oo ka tirsan ciidanka Nabadsugida oo lagu magacaabo G/sare Maxamed Cabdi Cali Shiine ayaa saaka shir jaraa’id ku qabtay magaalada Hargeysa wuxuuna soo bandhigay miinooyinka iyo walxaha qarxa oo ay ciidamada qabteen xalay waxaana uu sheegay in laba nin ay dhigeen miinada.
Miinada ayaa waxaa la rabay in lagu qarxiyo Biriijka Labaad ee magaalada Hargeysa oo u dhow guriga Madaxweynaha S/land. Ahmed Maxamed Siilaanyo. Labada Nin ee ee dhigay miinada ayaa xirnaa Jalbaab sidda uu sheegtay G/sare Shiine waxaana u suurto gashay in ay baxsadaan labada nin ciidamada Booliska ayaa sheegay in ay wadaan baaritaan.
Ilo wareed ku sugan magaalada Hargeysa ayaa u sheegtay Halgan.net in miinada la dhigay meel aan ka fogeyn guriga madaxwey naha S/land Ahmed Siilaanyo iyo Hotelka Hargeysa Club.